Waxbar gabadha oo ciribtir faqriga: Yaa kaalimaha hore ka galay imtixaankii Hoose/Dhexe ee Puntland? (Taxanaha 3aad – dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 28, 2019 5:37 g 0
Barnaamijka maanta waxa aan ku soornay ardeydii galay kaalimaha 1aad, 2aad iyo 3aad ee ixtimaanaadka Puntland ee Dugsiyada Hoose/Dhexe 2018-2019 iyo waliba waalidiinta ardeydaas. Su’aalaha waalidiinta waxaa kamid ah: waa maxay dabeecadaha ardeyndaan kaalinta 1aad iskoolka ka galay? Maxay se kaga duwanyihiin ardeyda kale oo sababay in ay sannad kasta kaalimaha hore qaataan?
Waxaa haddaba xusid mudan in kaalinta 1aad ee sannad dugsiyeedka 2018-2019 uu galay Shuceyb Xasan Cali oo ah ardey ka soo barakacey deegaanka Ceel Jaale, u dhow Marka, haatanna dhigta Dugsiga Hoose/Dhexe ee Giribile, kuna dhexyaal xerada barakacayaasha Bossaso.
Waxaan wareysnay Shuceyb iyo hooyadi Farxiyo Cabdi Cali si aan wax uga ogaano “waa kuma Shuceyb, maxay se yihiin dabeecadihiisa waxbarasho?”
Kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad ardeyda gashay ayagana ha moogaan in aad barato oo aad haddana ogaato waxa ay qaadato in kaalimaha hore lagu nagaado sannad kasta, sannadba sannadka ka danbeeya.
Taxanaha 3aad ee sannad dugsiyeedka 2018-2019 ee barnaamijku waxa uu qayb ka yahay mashruuca “Waxbar Gabadha oo Ciribtir Faqriga,” waxaana iska kaashada Wasaaradda Waxbarashada Puntland iyo hay’adda Relief International, waxaana maalgalisey dowladda Ingiriiska.
Hoos kaga bogo barnaamijka maanta oo xiiso gaar ah leh.
Maqaalo Kale 310 Wararka 21391
Warka Fiidnimo iyo Xasan Heykal, Daljir Boosaaso (dhegayso)